अभागीका मुक्तकहरू भाग्यमानीको हातमा | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका अभागीका मुक्तकहरू भाग्यमानीको हातमा – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
उहाँले कलमकारलाई तीन कृतिहरू दिनुभयो । कोपिला, जीवन लीला र अभागीका मुक्तकहरू, राम्रा राम्रा कृतिहरू सिर्जना गर्नु भएको रहेछ । उहाँको अघिल्लो कृति नाम थाहा भएऩ तर अभागीका केही कृति पढ़ेर पाठक प्रतिक्रिया दिएको थिएँ । तर यसपाली दुलियाजानको माटोमा उहाँसँग साक्षात्कार भेट भयो । पिता कलाधर रिजाल, माता नन्दकला रिजालको छोरा सदान्द रिजाल १५ मार्च १९४७ पर्वत जिल्ला शंकर पोखरी गा. वि. सं. नुवार भन्ने ठाँउमा जन्म भएको हो । विक्रम सम्वत् २०१२ सालदखि साहित्य सृजना कार्यमा लाग्नु भएको आज पर्यन्त धेरै कृतिहरू पस्कन सफल हुनु भयो । तर एउटा कुरा भन्न कर लाग्यो नामको पछि टाइटल अभागी किन लेख्नु भयो लेखकलाई प्रश्न ? उहाँको कृतिहरू स्तरीय उच्च स्थानमा हेर्न सकिन्छ सफल साहित्यकारको टाइटल आभागी कसरी भयो ।
उहाँ त भाग्यमानी हुनुहुन्छ हामी दुलियाजानमा भेट भएको समयमा कृति साटासाट गरेका थियौं । म व्यस्तताको कारणले उहाँको कृतिलाई हेर्न भ्याइरहेको थिएन आज मेरो छोरा बासु ढुङ्गेलको फोनमा “टीका ढुङ्गेको यात्रा संस्मरण सरसती पढ्दा” भन्ने विषयमा समालोचना पठाउनु भएछ । सदानन्द प्रति ऋणी बन्न पुगेँ । उहाँलाई सलाम गर्छु, कति छिटो समालोचना गर्नु भ्याउनु भएछ । ‘अभागीका मुक्तकहरू’ सङ्ग्रलाई ओल्टाई पल्टई हेरेँ, लक्ष्मी स्मृति साहित्य समाज द्वारा २०१८ मा प्रकाशित भएको रहेछ । पहिलो नजरमा चव्वालीस पृष्टको मुल्य रु. १०० अलिक बेसी नै भए जस्तो लाग्यो तर प्रकाशित संख्या ५० प्रति मात्र गर्नु भएको छ । सहि मुल्य रु. ५०० हुन पर्ने हो । प्रकाशकीयमा कम्ति अक्षरमा कृतिकारको प्रतिभालाई उठाएको पाइन्छ । लक्ष्मी स्मृति साहित्यले धेरै काम गरेको तथ्य थाहा पाएर हर्ष लाग्यो । साहित्यको मार्गमा प्रकाशकको बलले साहित्यकारहरूको प्रतिभालाई बोकेको हुन्छ । लेखकले आफ्ना भूलहरू आफै देखाउनु हुँदैन् । काम गर्दा भूलहरू हुन्छन् र त राम्रा-राम्रा कामहरूको सम्पादन गर्न सफल हुन्छन् सदान्द जस्ता जोशिला प्रतिभा । उहाँका केही मुक्तकहरू रसपान गरौं –
सुधा रस बग्न थाल्छ सौलो यो दिल चल्न थाल्छ ।”
माया प्रीतिका कुराले सदानन्द अभागीको मार्गमा पनि धेरै बाधा आएको रहेछ । उहाँले भोगेका देखेका तीता मिठा अनुभवहरूलाई आफ्नो
विधामा प्रकाश पार्न सफल हुनु भएको छ।
जीवनको हरपलमा कल्पनाले सागर तर्यो ।।”
सायद वैंशको रङ्ग चढ़ेपछि यस्तै हुँदो हो । एक अर्कामा दिलमा दिल लुकाई सकेपछि प्रेममा अन्धो बन्न पुग्छ । सबै बिर्सन्छ आफ्न्तहरू ।
यो छातीमा गाड़िएको छ प्रियसीको गुण हजुर
छातीमा प्रियसीको गुण गाड़िएपछि गाड़ीको दुइ पाङ्ग्रा झैं जिन्दगी सलल बग्छ। यस्तै हुनुपर्छ दुवैमा । एकजनालाई मात्र यस्तो अनुभव भए बीचमा बिछोड़ पनि हुनसक्छ। यसर्थ दुइ मुटुमा मायाका जालहरू बाधिनु पर्छ नखुस्किने गरी ।
के नै बाँकी रहन्छ र सर्वस्व किन्छ भने
खोक्रो तन समर्पणमा कोही लिन्छ भने ।”
धोका दिनेलाई राम्रो शब्द चयन गर्नु भएछ । दिलमा भालारोपी मायारूपी बन्धनले बाध्नेहरू प्रति नजर अन्दाज गर्नु भएको छ । यसर्थ भनिन्छ माया धेरै प्रकारका हुन्छन्। आफ्नो लागि हो कि गाई बेचे जस्तै फकार्इ-फकार्इ नर्कमा पार्ने हो कि बुझ्न कठीन छ । थाहै नपाई लुटी लिन्छ । वरमाला लगाए पनि खोक्रो तन बोक्ने मनहरूसँग सतर्क रहनुपर्छ । लेखकले गहिरिएर शब्दहरू बुन्नु भएको छ । एक-एक शब्दहरूले मन खोलेर बोलेको देखिन्छ ।
“पिउने भए” ।
यसरी खुल्ला रूपले भन्दा त प्रेम पत्रको ओइरो लाग्छ । एक ठाउँ मोवाइलमा फोटो खिचेको नक्सा पठार्इ दिनु भन्दा, मोवाइल नै पठाई दिन्छु भन्नेले म पनि पछि लाग्छु भने झैं हुन्छ । अनुभवका कुरा यहाँ राख्न चाहे छात्र अवस्थामा लौ हिँड़ भनेको भए पछि लाग्ने धेरै थिए ।
अहिले पनि पछि लाग्नु पर्छ भन्ने कतिको इच्छालाई त्यसै ओइलाए झैं भएको छ । माथि उल्लेख कविताले धेरैको मन जित्न सक्ला । यस्तै राम्रा-राम्रा मुक्तकहरू छन् अभागीका प्रकाशित कृतिहरू –
● आफ्नै व्यथाहरू (कविता सङ्ग्रह)
● पश्चातापको आँसु (कथा सङ्ग्रह)
● बुढ़ो जवानी (कविता सङ्ग्रह)
● कोपिला (लघु काव्य)
● अभागीका मुक्तकहरू (मुक्तक सङ्ग्रह) हेरेछि स्पष्ट भयो कि बहुप्रतिभाशाली सदानन्द अभागीका कृतिहरू लोकप्रिय छन् ।
उहाँलाई तीन नामहरूबाट चिन्न सकिन्छ न्वारनको नाम खगेश्वर रिजाल, प्रचलित नाम सदानन्द जैसी, अनि साहित्यिक उपनाम सदानन्द ‘अभागी’ जे नै होस् अभागीको योगदानलाई कदर गर्छु । धेरै विधामा कलम चलाउने बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वका धनी सहित्य समाजका निधि नै हुन् भन्दा ज्यादा नहोला । भाग्यमानीको हातमा अभागीको मुक्तकहरू परेपछि पाठक प्रतिक्रिया यहाँहरूलाई सुम्पेको छु ।
This entry was posted in आलोचना/टिप्पणी, विचार/दृष्टिकोण, विवेचना, समीक्षा and tagged dhungel, Pallawa, Ratan, Sikkim, Teeka, Tika, टीका ढुङ्गेल ‘रटन’, पल्लव. Bookmark the permalink.
← ‘तिमी र म’
दुर्गाप्रसाद ग्वालटारे का तीन गजल →